Akụkọ - Olee otú dozie ntapu nke manifold?
Olee otú dozie ntapu nke manifold?
Otu Sunflymepụta manifold na nnọọ elu àgwà, ọ bụ nnọọ ewu ewu na mmasị site ahịa si n'akụkụ nile nke ụwa. Ma ụfọdụ ọzọ factory manifold ka na-eche nsogbu na leakage mgbe eji na ala kpo oku usoro.
1.Ọ bụrụ na mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ n'ala na-agbapụta, buru ụzọ lelee ebe ọnyà ahụ dị ma nyochaa ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na enwere nkwụsị na nkwonkwo, ị nwere ike iji ụma kechie teepu biochemical ma kpokọta ya.
2.Radiant n'ala kpo oku bụ usoro ikpo ọkụ dị elu. Ụkpụrụ ọrụ ya bụ ịfefe mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'okpuru ala ma ọ bụ taịl nile nke ala ma ọ bụ na-edozi eriri ọkụ ọkụ iji kpoo ala. n'ala ma na-tumadi radiated na ohere n'elu n'ala dissipate even, nke mere na ahụ mmadụ nwere ike na-eche dual thermal mmetụta nke okpomọkụ na ikuku okpomọkụ.
A na-ekewa usoro ikpo ọkụ nke ala n'ime akụkụ atọ: 1> Usoro ikpo ọkụ (nnukwu ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka Central kpo oku, mgbidi na-ekpo ọkụ, stovu gas, wdg) 2> Usoro nchịkwa (ọtụtụ, multi-function filter, backwater stop). valvụ, ngwakọta mgbapụta, mgbapụta mgbapụta wdg) 3> Usoro mgbanwe okpomọkụ (gụnyere mkpuchi mkpuchi, akwụkwọ radiant na nchara nchara, wdg)
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ala bụ ebe nchịkwa nke dum ime ụlọ geothermal kpo oku. Ọ na-arụ ọrụ nke ikewa mmiri na nrụgide. Mgbe ikpo ọkụ na-abanye n'ime ụlọ ahụ, ọ na-abanye n'ime isi nke ọkpọkọ mmiri mgbe ọ gafesịrị multifunctional. filter.N'ime usoro a, nzacha na-ehichapụ ihe ọkụ ọkụ iji gbochie adịghị ọcha ịbanye na netwọk pipeline n'okpuru ala iji gbochie pipeline.A na-arụnye ọkpọkọ isi n'ụzọ kwụ ọtọ. N'ụzọ dị otú a, na-eji ụkpụrụ nke nha nha nha nha na nrụgide nha anya, a na-ekesa ọkụ ọkụ na-ekesa na ọkpọkọ alaka ụlọ ọrụ. nchịkọta msnifold, wee si na mmiri azụ mmiri na-asọba n'ime usoro kpo oku. Tụkwasị na nke ahụ, a na-agbakwunye ngwaọrụ na-agwakọta mmiri na-ekpo ọkụ nke onwe ya, nke pụtara na mgbe mgbanwe okpomọkụ gasịrị, okpomọkụ nke mmiri ọkụ ka dị elu. N'otu oge ahụ, ike nwere ike ịzọpụta.
Oge nzipu: Dec-21-2021